Geomarketing vs. Qarsoodi: Saamaynta Ciriiri-saarista isticmaalaha caadiga ah - Gofumed
Febraayo, 2015 Geospatial - GIS, Google Earth / Maps
Tan iyo markii ay hirgelinta warshadaha advertising, geolocation Waxay noqotay fikrad moodal ah, oo loo arko mid ka mid ah faa iidooyinka ugu weyn ee aaladaha mobilada, marka la barbar dhigo PC-yada, fikrada xayeysiiyayaashu.
Si kastaba ha ahaatee, arimaha gaarka ah ayaa laga wada hadlaa, taas oo ah, sida ay qaar ka mid ah, ay saameynayso geolokation laftiisa. Later, waxaan si kooban ugu jeedin doonaa arrintan.
Isticmaalka geolocation gudaha suuq-geynta guuritaanka
Mid ka mid ah fursadaha ay soo bandhigtay suuq-geynta guurguura ayaa ah inay sumcaduhu u adeegsan karaan teknoolojiyadda juqraafiyeed si ay u gaaraan dadka isticmaala farriimaha waqtiga ku habboon ee ku saabsan aaladooda. Hadafka ugu dambeeya ayaa ah in lagu soo jiito macaamiisha sumadda si loo xiro iibka. Si kastaba ha noqotee, way haboon tahay in la cayimo in juqraafi ahaan ay qaadatay waqti in la qaato.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyaabo qaar ka faa'iideysanaya booskooda, oo sii kordhaya muuqata:
Qaadashada codsiyada: Caadiyan, macluumaadka goobta ku salaysan lama wadaagin ama si joogto ah.
Kordhinta isticmaalka barnaamijyada moobiilka iyo, marka lagu daro, kororka tirada barnaamijyada u adeegsada macluumaadka goobta inay ku shaqeeyaan (makhaayadaha maxalliga ah iyada oo loo marayo Khariidadaha Google, tusaale ahaan), waxay keentay in dadka isticmaala, in badan oo ka badan, ay rabaan inay wadaagaan faahfaahintaas.
Hadda, way u fududahay adeegsadayaasha inay awood u yeeshaan ama baabi'iyaan astaamaha wadaagista goobta, oo inta badan ku filan hal hal riix. Waa raaxo taas oo dhalisay in tirakoobka xayeysiinta ee juqraafi ahaan si aad ah u koray.
Geomarketing waqtiga dhabta ah: los Suuqyada dhabta ah waxay keeneen isu-geyn ballaaran oo noocyada kala duwan ee isdabajooga leh is-weydaarsi yar oo kala duwan, iyada oo loo maro albaabka ugu badan ee ku jira xayeysiiska-App.
Thanks to labadan arrimood (kobaca codsiyada iyo geomarketing xilliga dhabta ah), hadda waxaa suurtagal ah in la bilaabo ololayaal ku saleysan geolocation, Lacag ku filan si aad u hesho waxtar dheeraad ah ee xayaysiinta.
Adeegsadayaashu waxay si dabiici ah u heli karaan ololeyaal xayeysiis ah oo tixgelinaya meesha ay ku sugan yihiin, inta ay ku gudajiraan barnaamijyada.
The geolocation Miyuu saameeyaa asturnaanta?
Dadka, maalmahan, isticmaalaan qalab cusub oo muujin kara goobahooda iyo, marka lagu daro, waxay qaadi karaan sawirro, waqtiga dhabta ah, waxa ay sameeyaan, u fakaraan iyo / ama u baahan yihiin. Si kastaba ha noqotee, iyo ra'yiga qaar, geolokatigu wuxuu ku soo rogayaa xaqa xurmaysan ee qarsoodiga ah, oo loo yaqaan "xaqa u gaarka ah".
Dabcan, waxaa jira codsiyo, sida Google Earth, oo kaliya u adeega hage iyo, ma aha qasab, soo gali.
Anyway, doodda weli taagan ee la xiriira geolocation iyo awoodooda in wax la yeelo dadka isticmaala, estárseles ku duuleen iyaga gaarka, sida ay natiijada waxbarashada qaar ka mid ah in walaac shaaca ka qaaday in aysan awoodin inay ku raaxaystaan ayuu yiri qarsoodi.
Natiijooyinka baadhitaanada qaarkood, ayaa muujinaya in in kabadan nus dadka ay haystaan ​​qalab mobile ah geolocation, waxay daneeyaan luminta asturnaanta, isticmaalka howlahooda isweydaarsiga.
Inta lagu jiro mid ka mid ah daraasaddan, gaar ahaan mid ka mid ah shirkadda ammaanka ee Webroot, kuwa leh 1.500 qalabyada leh awoodaha geolocation ayaa la wareystay, oo ay ku jiraan dadka 624 ee Boqortooyada Ingiriiska.
Waxyaabaha halista ah ee ka mid ah geolocation
Mid ka mid ah xaaladaha muujinaya saameynta dalabka uu ku leeyahay isticmaaleyaasha, ayaa ah in waqtiga oo dhan ay muujinayaan meesha ay joogaan, waxay qabtaan, waxay iibsadaan iyo, ugu dhowaan, waxay ku dhawaaqayaan inay ku sugan yihiin khasnajiga lacag qaadashada, in kasta oo aysan ka maqnaan doonin. yaa sameeya
Laakiin khabiirada, ma aha wax ku saabsan barnaamijyada ama qalabka, laakiin ku saabsan dadka isticmaala naftooda, maadaama ay yihiin kuwa waa in ay ka warqabaan xogta ay halkaa ku bixiyaan iyo saameynta ay ku yeelan karaan noloshooda.
Taasina ma ahan oo keliya geolocation laakiin, sidoo kale, habab kale oo ogolaanaya isticmaalka macluumaadka, kuwaas oo noqonaya mid shaqsiyan ah iyo mid dareen ah. Sidii ay u qaadatay oo wali waxay ku jirtaa waxbarashada waxbarashada ee isticmaalka Facebook, sidoo kale waxay noqon kartaa nidaamkan juqraafi ahaaneed.
Tani waa walaac hadda, sababtoo ah dad badan oo ogayn waxyaabaha ka imaan kara adeegyadan, dad badan oo og in images in qaadato waa in la daabacay sida guri cusub, complete leh cinwaankaaga.
Waxaa hoos u Yimaaddo wixii arrimaha yahay, ka hor inta uusan carabaabin wax walba oo la sameeyo, ammaanka qof walba (user ee geolocation), si looga fogaado xaaladaha adag la baajin karin, dhab ahaantii. Waxaa suurtagal ah, kadib, in la ilaaliyo amniga iyadoo ilaalinaysa asturnaanta.
Post Previous«Previous Hel sax submeter ka iPad / iPhone ah
Post Next Product Isbarbar qaybtaNext »